Yaa Ka Mas’uul ah Dhallinyarada Tahriibeysa? | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home Arimaha Bulshada Yaa Ka Mas’uul ah Dhallinyarada Tahriibeysa?
Yaa Ka Mas’uul ah Dhallinyarada Tahriibeysa?
Tan iyo markii uu dagaalkii sokeeye ka qarxay Soomaaliya, dalka wuxuu galay nidaam-darro jirtay muddo ku dhow rubuc qarni. Maadaama uu dagaalkii sokeeye sii daba dheeraaday, kumannaan qof ayaa ka carartay dalka si ay naftooda u badbaadiyaan. Kuwa dalka ka qaxay waxaa ku jiray dhallinyaro rag iyo dumarba leh.
Colaadaha waxay soo mareen xaalado kala duwan. Dowlado kumeel gaar ah iyo dowlad rasmi ah oo aan kumeel gaar ahayn intaba waa la soo dhisay intii uu dalku burbursanaa. Dagaallada intii lagu jiray waxaa la helayay iskuullo iyo jaamacado, arday badan ayaana rajadooda waxbarasho sii kordheysay. Balse hal arrin ayaan weli la maareynin; shaqaaleysiinta dhallinyarada.
Shaqa u abuurista dhallinyarada waxay aasaas u tahay nabadda iyo ammaanka waddan kasta, waana mid ka mid ah arrimaha ka joojin kara dhallinyarada in ay tahriibaan, naftoodana ay khatar geliyaan.
Aad bay u badan tahay tirada dhallinyarada ah ee badaha ku dhintay iyagoo tahriibaya. Kumannaan da’yar ah oo isugu jira rag iyo dumar ayaa u tahriibay waddamada deriska, halkaas oo ay kala kulmeen geeri iyo duruufo nololeed oo aad u adag.
Si loo yareeyo tirada aadka u badan ee tahriibka ku dhimaneysa, dad badan waxay rajeynayeen kaddib dhismihii dowladdii ugu horreysay ee aan kumeel gaar ahayn in ay yaraan doonto tirada dhallinyarada tahriibeysa. Nasiib-darro, dowladda ma aanay la iman siyaasad iyo barnaamijyo cad-cad oo khuseeysa dhallinyarada, shaqana uma aanay abuurin. Haddii shaqo loo abuuri lahaa, waxay yareyn lahayd tahriibka.
Isla sababtaas iyaga oo ka duulaya ayaa waxaa dhawaanahan aad u kordhay dhallinyarada u tahriibeysa Yurub. Dhabbaha ay u marayaan Yurub waa saxaraha dhibka badan ee Liibiya iyo badda Mediterranean. Si aan wax badan uga ogaado tahriibka dhallinyarada maalmahan socda, waxaan la kulmay qaar ka tirsan dhallinyaro isku diyaarinayay in ay galaan safarkan khatarta badan. Mid ka mid ah ayaa waxa uu igu yiri, “shaqo la’aanta baahsan ee ka jirta dalka awgeed, waxaan halis gelineynaa nafteenna si aan u helno nolol ka fiican tan aan ku noolnahay”. Wuxuu intaa ku daray “waxaan u baahannahay shaqo si aan u guursanno, mustaqbal fiicanna u hiigsanno, balse ma sii joogi karno waddan dhallinyaradii jaamacadaha dhameeyay aanay shaqo heysan”.
Dhallinyarada aan la hadlay waxay intooda badan ka cabanayeen inay dowladda shaqooyinka ku bixiso qaab qabiil. “Wax macno ah ma sameyneyso haddii aad tahay qof awood, aqoon iyo khibradba u leh shaqo dowladda ka bannaan, qaraabo kiil ayaa shaqeynaya.” Qof aad ugu dhow dowladda oo ila hadlay ayaa sidaas ii sheegay.
Inkastoo ay jirto dhallinyaro aad u tiro badan oo jaamacadaha dhameeyay, haddana aan shaqo heysanin, ma jirto siyaasad dhallinyaro oo shaqeyneysa una abuureysa fursado shaqo. Su’aasha waxay tahay, maxay ka qabatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya yareynta shaqo la’aanta?
Waxaa la yaab leh hal hay’ad oo ay Turkey leedahay ayaa 450 dhallinyaro ah oo ka kala yimid koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ku tababartay xirfadaha wax beerashada. Sidoo kale waxay siisay qalabkii iyo aaladihii lagama maarmaanka u ahaa si ay ugu shaqeystaan xirfadihii la baray. Maadaama dhallinyaradaas la caawiyay, kama tagi doonaan dalkooda. Caawimaadda iyo tababarkaas la siiyay ayaana keenay in ay dareemaan in la siiyay fursad ay ku shaqeystaan.
Tirakoob la sameeyay ayaa sheegaya in boqolkiiba 70 ay Soomaalida da’dooda ka yar tahay 30 sano. Sidaas cagsigeeda dowladda waxay ku guuldarreysatay in ay garawsato awoodda dhallinyarada. Horumarka fog ee waddan kasta waxaa lagu qiimeeyaa sida dhallinyaradiisa loo maalgeliyo. Haddii jiilkeenna da’da yar ay sii wadaan in ay tahriibaan, tani macnaheedu waa mustaqbalka waddanka in uu dhibaatooyin wajahi doono.
Soomaalida waa in ay u istaagto maalgashiga dhallinyarada, iyagoo waxbaraya, isla markaana u abuuraya fursado shaqo. Dhallinyarada waxay dhadhamiyeen qaraarka sharci la’aanta, dagaallada iyo xaaladihii adkaa ee ka dhashay. Dowladda waa in ay dhallinyarada siisaa shaqooyin, haddii ay leeyihiin aqoontii iyo xirfaddii looga baahnaa, iyagoo aan heybtooda lagu kala soocin. Dhallinyarada maanta waa hoggaanka berri.
W.Q: Mahad Waasuge
Previous articleDowladda Soomaaliya oo Cambaareysay Dhibaatada Lagu Hayo Soomaalida K/Afrika
Next articleDowlad-xumida Soomaaliya iyo Sida Looga Bixi Karo